သက်ဝေ: အပျင်းပြေ တနင်္ဂနွေ
Posted by သက်ဝေ at 7:10 PM
မောင်မျိုး June 16, 2010 at 7:26 PM
facebook မှာ နောက်ကျပေမယ့် ဒီမှာ ကျနော် အရင်လာစားတယ် ပိုတာတွေ ချိုင့်ထဲထည့်သွားတယ် နောက်ကျတဲ့သူတွေ ပန်းကန်တွေသိမ်းလိုက်တော့နော့်း)
အန်ကယ်အောင် ၊ ဂျီတော် ခင်ဦးမေ တို့လို လူကြီးတွေကိုမရိုမသေပြောသွားတာ ဟိဟိ
ချစ်ကြည်အေး June 16, 2010 at 7:49 PM
ဒီတခါတော့ ဖူးလ်ဗားရှင်းနဲ့ နှိပ်စက်တယ်ပေါ့လေ....
Ko Paw June 16, 2010 at 7:55 PM
သြော်.... အပြစ်ကင်းတဲ့ ချစ်တနင်္ဂနွေလေးဟာ
(လေးမွန်၊ ထွေးမွန်တို့ ဦးလေး မောင်မောင်ဇာရဲ့ ဒိုင်ကြောင်လေးကို အခါအခွင့် သင့်လို့ ထုတ်သုံးလိုက်ပါတယ်။)
ချဉ်ပေါင်ရွက်နဲ့ မျှစ်နဲ့ကြော်တာဟာ တကယ်တော့ ဘယ်အချိန်စားစား ခံတွင်းကို မြိန်စေတဲ့ ဟင်းတခွက်ပါပဲ။ အတွေးနဲ့တောင် သွားရည်ယိုစေပါတယ်။ သို့စင်လျက် ဓါတ်ပုံ တကူးတက ရိုက်ကူးပြသကာ နှိပ်စက်တတ်သော အကြင် သက်ဝေအား သိပ္ပံမောင်ဝ လေသံနှင့် ဆိုရသော် “အလွန်ညစ်သော သက်ဝေ ပါတကား” ဆိုရမယ် ထင်ပါရဲ့ ။း-)
ရေးနေရင်း တံတွေးကိုတောင် ဂလုကနဲ မျိုချလိုက်မိပါတယ်။း-)
Anonymous June 16, 2010 at 7:57 PM
သက်ဝေ June 16, 2010 at 8:08 PM
မောင်မျိုး... ပိန်ပိန်လေးဆိုတော့ ဝလာအောင် များများစားသွားပါ...
ချစ်ကြည်... အဟဲ.. တခါတလေပါ... နှိပ်စက်တယ်လို့ မမြည်အောင် တကယ်ချက်ကျွေးပါ့မယ်... တရက်လောက် ချိန်းပါ...
ကိုပေါရေ... လေးမွန် ထွေးမွန်တွေ ခုထိ မမေ့သေးပဲကိုး...
အိမ်ချင်းနီးရင် ချဉ်ပေါင်ကြော် လာပို့ပေးပါတယ်... အပျံသင်သွားတဲ့ ခိုလေးရဲ့ နေရာလေးကို ကြည့်ရင်းနဲ့ပေါ့...း))
သေသေချာချာ စဉ်းစားပြီးမှ မှားရေးလိုက်တာ... အဟိ...
ကျေးဇူးကတော့ တင်ပါရစေ... ဒါမှလဲ ခေတ်မှီမှာ မဟုတ်ထား...
ကိုပေါ ကြားရင်တော့ အလွန်ညစ်သော သက်ဝေ ကနေ
အလွန်ညစ်ပြီး အလွန်ခေတ်မှီချင်သော သက်ဝေ လို့ နာမည်ပေးမယ် ထင်ရဲ့နော်...း))
K June 16, 2010 at 8:10 PM
မကျေနပ်ဘူးကွ... ဘယ်ုတုန်းက ချက်မှန်းလဲ မသိ..
မပါရလို့.. ငိုနေတယ်..း((
rose of sharon June 16, 2010 at 8:21 PM
နောက်တခေါက်ထပ်ငေးခွင့်ရသွားတာပေါ့... သွားရည်နောက်တခေါက်ထပ်ကျအောင် လုပ်တယ်...
T T Sweet June 16, 2010 at 8:45 PM
ဓာတ်ပုံကို သေချာပုံကြီး ချဲ့ ကြည့်သွားပါတယ်။ ၃ခါ ပုံကြီးချဲ့ ကြည့်ပါတယ်။ ၃ခါ သွားရေကျသွားပါတယ်။
အိမ်မှာ ချဉ်ပေါင်ရွက်ရော ပုဇွန်တွေရောရှိတယ်။ မနက်ဖြန် အဲဒီ့ပုံထဲက အတိုင်း တူအောင်ကို ကြော်စားဦးမှာ ...မရဘူး ... စိတ်ကြီးတယ် ...း)
ကိုဇော် June 16, 2010 at 8:57 PM
အပျင်းပြေ တနင်္ဂနွေ အကြောင်းကို. . .
အဟုတ်ထူး တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ လာဖတ်သွားတယ်ဗျာ. . .
ရှလွတ်. . . .တောက် . . .တောက်. . .
ဖြူ June 16, 2010 at 9:02 PM
အော... မသက်ဝေရဲ့ နာမယ်ကျော် ထမင်းပွဲဆိုတာ ဒီလိုကိုး...
စားခွင့်ပါရရင် ပို ကျေးဇူးတင်ပါမယ်...
အပြုံးပန်း June 16, 2010 at 9:33 PM
ညီမလေး June 16, 2010 at 10:44 PM
လုပ်ကြပါလုပ်ကြပါ .. မမတို့က ချက်တတ်သမားတွေဆိုတော့ ဟင့် T.T
ပန်းခရမ်းပြာ June 16, 2010 at 10:54 PM
အားကျမခံ ဒီ တနင်္ဂနွေမှာ မုန့်ဟင်းခါး ချက်စားမှာ . ..ငါးကြင်းဆီသတ်တွေကို ရန်ကုန်က သယ်လာတယ်။ အိမ်နီးရင်တော့ မသက်ဝေ စားဘို့ လာပို့ချင်သား ... စေတနာတွေ ...
mg lay June 16, 2010 at 11:56 PM
ကွန်မန် ၈၀ ကျော်တဲ့ အစ်မသက်ဝေရဲ့ ပို့စ် ကိုဖတ်ချင်လိုက်ရတာ
ဖတ်ရတော့မှ ကိုယ့်လည်ပင်းကို ကြိုးကွင်းစွပ် မှန်းသိရတော့တယ်
khin oo may June 17, 2010 at 12:35 AM
တရားမှတ်နေတာပါ မသက်ဝေ ။
အဟာရပစယောဟောတုတဲ့ ရှိတာလေးနဲ့ပဲ အဟာရ ဖြစ်ရုံ မှီဝဲပါတယ်။ ဒီလို ဟင်းကောင်းတွေနဲ့ဆို ထမင်းတအားစားပြီး ရှတ်ကီရာလို မလှပဲ နေမှာစိုးလို့။
kaungkinpyar June 17, 2010 at 2:27 AM
ကုန်သွားပီ ပေါ့ နော်...
Anonymous June 17, 2010 at 8:16 AM
pandora June 17, 2010 at 9:04 AM
ဒီတစ်ပတ်အဖို့ ကိုဂျီး ခမျာ အဲဒီဟင်းတွေနဲ့ပဲ ၇ ရက် ၇ လီ စားရရှာတာ ဘယ်သူမှ မသိဘူး.. ဘီတူမှ မတိဘူး.. ဟိဟိ
ပုံရိပ် June 17, 2010 at 10:07 AM
အဟင့် နောက်ကျသွားပြီ။ ကုန်ပြီလားဟင်။
အင်ကြင်းသန့် June 17, 2010 at 12:28 PM
မမရေ....ထမင်းစားချိန်လာဖတ်တာ။ ဟင်းမကောင်းတာနဲ့ အတော်ပဲ။ ပုံကိုတစိမ့်စိမ့်ကြည့်ပြီး ထမင်းစားလိုက်တယ်း))
(ဒါနဲ့ မမရေ မျက်နှာစာအုပ်က မမသက်ဝေနဲ့ ဒီမမသက်ဝေနဲ့ တစ်ယောက်တည်းဆိုတာ ခုမှ သေသေချာချာ သိတော့တယ် .... တုံးချက်း))
Y June 17, 2010 at 2:55 PM
ဇွန်မိုးစက် June 17, 2010 at 5:11 PM
mae June 17, 2010 at 7:46 PM
တန်ခူး June 17, 2010 at 8:21 PM
အိုး... မရဘူး...ပြန်ချက်ပေး... အားပေးတဲ့သူတွေများတော့ တို့ လဲလာရော ကုန်ပြီ.... အသစ်ချက်ပေးနော်...နော်လို့ 
myo June 18, 2010 at 11:06 AM
tg.nwai June 26, 2010 at 2:50 AM
ပုံ/ ခေတ်နောက်ကျနေသူ တစ်ဦး